Apple က iPhone 5S ဘက်ထရီ borked ကြောင်းဝန်ခံသည် - သတင်း Rule
Apple က iPhone 5S ဘက်ထရီ borked ကြောင်းဝန်ခံသည်
Gadget Designer က Apple အချို့ iPhone 5S ကိုမော်ဒယ်များဘက်ထရီပြဿနာတွေခံစားနေရပြီးနှင့်ထိခိုက်သူတို့အားအစားထိုးကတိပြုခဲ့သည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်.
Apple ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်က iPhone 5S စမတ်ဖုန်းတချို့ကအစောပိုင်းသုံးဘက်ထရီကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. ညည်းတွားခဲ့ကြ, ကြာကြာဘက်ထရီသက်တမ်းတစ်ဂတိတော်ကိုနေသော်လည်းကြောင့်ဟုဆို, သူတို့ရဲ့ iPhone 5S ကိုဟန်းဆက်မြန်သထက်မြန်အောင်ဘက်ထရီဖျန်ပြီ.
ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းပြဿနာကြောင့်ထိခိုက်သည်ကိုမည်သို့ဆိုးရွားစွာမသိရသေးဒါဟာင်, သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ iPhone 5S ကိုသုံးနာရီကနေတဆင့်အောင်ရုန်းကန်နေရတဲ့က Apple ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဖိုရမ်မှာအစီရင်ခံခဲ့ကြ, အခြားသူများကိုဘက်ထရီပတ်ပတ်လည်အားဖြင့်နစ်မြုပ်ကြောင်းသတင်းပို့နှင့်အတူ 20 ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုင်းနာ​​ရီ.
ပန်းသီးတောင်းဆိုမှုများအဆိုအရ, အိုင်ဖုန်း 5S ကြာရှည်သင့်တယ် 25 ယခင်အိုင်ဖုန်းထက်ပိုရှည်ရာခိုင်နှုန်းက, ကတက်ဘို့ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်ဟုဆို 250 standby အပေါ်နာရီ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဆယ်နာရီ, သို့မဟုတ် 40 သီချင်းနာ​​းထောင်၏နာရီ
တစ်ဦးက Apple ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက New York Times ကိုမှကြေညာချက်တစ်ခုက iPhone 5S ဘက်ထရီပြဿနာရှိရဲ့ဝန်ခံ. လို့သူကပြောပါတယ်, “ကျနော်တို့မကြာသေးမီကဘက်ထရီလျှော့ချဘက်ထရီအသက်တာ၌ကောက်ခံသို့မဟုတ်ရလဒ်မှကြာကြာယူစေနိုင်ကြောင်းကို iPhone 5S devices များဟာအလွန်ကန့်သတ်အရေအတွက်ထိခိုက်စေတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပြဿနာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ.
Apple ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုချို့ယွင်းကြောင့်ထိခိုက်ကြသည်မည်မျှကို iPhone 5S ဟန်းဆက်မပြောခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမဲ့ New York Times ကိုသာဖွင့်ကြောင်းအစီရင်ခံ “အနည်းငယ်တထောင်” ထုတ်ကုန်.
ဤသည်ကို iPhone 5S က၎င်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းကမွငျဖူးသောတစ်ခုတည်းသောပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး. ထိုသို့ရောင်းချခြင်းအပေါ်သွားလေ၏ကတည်​​းက, ဟက်ကာများဟန်းဆက်ရဲ့ Touch ID လက်ဗွေရာအာရုံခံအက်ကွဲကြပြောဆိုထားသည်, အခြားအသုံးပြုသူများ iMessage နှင့် ပတ်သက်. စောဒကတက်ခဲ့ကြစဉ်, accelerometer နှင့်ကျပန်း restart လုပ်လိုက်ပါ bug တွေ. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, Apple က iPhone 5S ဘက်ထရီ borked ကြောင်းဝန်ခံသည်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
18091	0 ပန်းသီး, ဘက်ထရီ, iMessage, iPhone ကို, iPhone ကို 5, New York Times ကို, ပံ့ပိုးမှုဖိုရမ်, ထရေဇာဘရူ
← Mac OS X ကို 10.9 Mavericks အစိတ်အပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရန်2မြောက်ဘက်တွင်သြစတြေးလျကိုချွတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနယူးလင်းပိုင်မျိုးစိတ် →